अर्को राजनारायणको उदय 
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साख एकपछि अर्को गिर्दै गएको छ । लोकमानसिंह कार्की प्रकरण हुँदै दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठकसम्म आइपुग्दा अख्तियारको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का लागेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायका पदाधिकारीले नै घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आमनागरिकको अख्तियारले सुशासन कायम गर्ने विश्वासमा ठेस लाग्न पुगेको छ । संवैधानिक परिषद्ले भागबन्डाका आधारमा गलत व्यक्तिलाई अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संस्थाको साख पूर्ति नै हुन नसक्ने गरी गिर्न पुगेको हो ।
राजनारायण पाठकको घुस लिएको भिडियो प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीशदेखि, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा धेरैपटक सोच्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको छ । राजनारायण पाठकको घुस लिएको भिडियो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले पनि अहिले विवादमा आएका छ । उनका भान्जा सुजन पौडेलले अनेक प्रकरणमा मामाको नाम भजाउन थालेपछि सचिव न्यौपाने पनि विवादमा तानिएका हुन् । सचिव न्यौपानेका २५ वर्षीय भान्जाले अख्तियारको आडमा धेरैलाई तर्साएर २५औं करोड रुपैयाँ आर्जन गर्नु र यसमा मामा मौन रहअनुका कारण उनको नियतमाथि शंका गर्न थालिएको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार मामा अख्तियारमा सचिव भएको १५ महिनामै उनले ५०औं रोपनी जग्गा जोड्न भ्याइसकेका छन् । उनको नाममा बालुवा खानी छ । जसमा सचिव न्यौपानेको पनि लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ का नातिराज पौडेलका नाति पुष्कलराज पौडेलका छोरा वर्ष २५ का सुजन पौडेलसँग आज त्यति धेरै सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर छानबिन गर्ने हो भने त्यो सबै सचिव न्यौपानेको आडमा आर्जन गरेको खुल्ने स्रोतको दाबी छ । सुजन पौडेल महेश्वर न्यौपानेका भान्जा हुन् भन्ने कुरा उनले सामाजिक सञ्जालमा विवाहको तिथिमा दिएको शुभकामना, जन्मदिनदेखि विभिन्न अवसरमा दिएको शुभकामनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । मामा भनेरै उनले शुभकामना दिने गरेका छन् । र, सचिव न्यौपानेसँग खिचेका तस्बिरहरू पनि उनको वालमा देख्न सकिन्छ ।
मामाको आडमा भान्जा पौडेलले तर्साउँदै घुस असुल्ने र पक्राउ गरिएकाहरूसँग पनि भनेजति रकम दिए बयान कमजोर दिएर विशेष अदालतबाट मुद्दा जिताइदिने भनी मोलमोलाइ गर्दै आएका स्रोतले बतायो । मामा न्यौपाने अख्तियारमा सचिव भएर आएपछि भान्जा सुजनले के–के गरे त ? केही तथ्य यस्ता छन् ः
घटना नम्बर १ ः २०७५ वैशाख १९ मा नापी कार्यालय साँखु, काठमाडौंका प्रमुख नापी अधिकृत भागवत साहलाई अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले पक्राउ ग¥यो । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ स्थित नयाँपाटीमा रहेको ३६ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग कार्यालय सहयोगी खेमराज भण्डारीमार्फत २ लाख ५० हजार लिएको भन्दै साहलाई कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यो ३६ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरी २ लाख ५० हजार घुस दिने सेवाग्राही थिए, काठमाडांै जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका ३ बस्ने सुजन पौडेल । त्यो ३६ रोपनी जग्गा पनि उनकै थियो । अख्यिारकै विज्ञप्तिका अनुसार साह आफैले घुस लिएका थिएनन् । कार्यालय सहयोगी भण्डारीमार्फत लिन खोजेका थिए । रंगेहात घुस लिँदा लिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिन्छ । करिब दिउँसोको २ बजेको थियो साह कार्यालयमै थिए । कार्यालयको ढोकामा रहेका भण्डारीलाई पौडेलले पैसा हातमा लगाइदिएपछि साहलाई तत्काल पक्राउ गरिएको थियो ।
घटना नम्बर २ ः २०७५ असोज २१ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्ध काठमाडौंका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) श्यामकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ ग¥यो । सेवाग्राहीबाट सोनी कम्पनीको टिभी खरिदबापत १ लाख ४० हजार घुस लिएको अरोपमा राईलाई पक्राउ गरियो ।
सोनी कम्पनी खरिदका लागि १ लाख ४० हजार घुस दिने सेवाग्राही पनि उनै २५ वर्षीय सुजन पौडेल थिए । अख्तियारको विज्ञप्तिमा डिएसपी राईले सेवाग्राहीसँग सोनी कम्पनीको टिभी खरिद गरी ल्याइदिनू भनी जिन्सी सामानका रूपमा घुुस÷रिसवत माग गरेको र टिभी आफैंले खरिद गरी ल्याउने र सो खरिद गरेबापतको बिल भुक्तानी दिन सेवाग्राहीलाई पटकपटक फोन गरी घुस मागेको दाबी गरिएको छ ।
६ महिनाका बीचमा दुई–दुई जना सरकारी अधिकृतलाई घुस दिएर अख्तियारको चिसो छिँडीमा लैजान सक्ने पौडेल आखिर को हुन् त ? २५ वर्षमै कसरी भए अर्बपति ?
सुजनको परिवार यसअघि सामान्य परिवारको भएको उनका छिमेकीहरूलाई थाहा छ । सुजन पौडेलका बुबा, अख्तियार सचिव न्यौपानेका भिनाजु पुस्कलराज पौडेल जजमानी पेसा गर्ने पुरोहित हुन् । यसबाहेक उनको परिवारमा कोही पनि रोजगारीमा छैनन् । तर गएको तीन वर्षमा छोरा सुजन पौडेलले भने अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । काठमाडौंको साँखु क्षेत्रमा मात्रै उनको करोडौं मूल्यबराबरको जग्गा रहेको छ । मामा अख्तियारमा सचिव भएको अवधिमा मात्रै उनले करोडौंको जग्गा जमिन खरिद गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट खुलेको छ ।
पछिल्लो रेकर्डअनुसार मात्रै साबिक बालुवा गाविस कित्ता नम्बर ३२४ को नक्सा सिट नं. ६, ६ ग, खण्डे नं. को कि.नं. ३७९ नम्बरको जग्गा २०७५ वैसाख २७ मा पास गरेका छन् ।
साबिक बालुवा गाविसकै ३२४ को कित्ता गत वैशाख २७ मै खरिद गरेका छन् । जुन हाल कि.नं. ३७८ हो । बालुवाकै ३८० नम्बर कित्ता जग्गा पनि उनले २०७५ वैशाख २७ मै पास गरेका छन् ।
त्यसैगरी २०७५ जेठ १ मा साबिक नाङ्लेभारेको कि.नं. ११०, नक्सा सिट नं. ३, ३ ख को जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । नाङ्लेभारेकै साबिक कि.नं. ११३ पनि सोही दिन खरिद गरेका छन् । सुजन पौडेलले नाङ्लेभारेको कि.नं. ११६ पनि किनेका छन् । यीबाहेक अन्यत्र पनि उनको नाममा धेरै जग्गा जमिन रहेको स्रोतको दाबी छ । भक्तपुर साबिक चित्तपोल गाविसमा १ रोपनी १५ आना जग्गा उनको नाममा देखिन्छ ।
यी जग्गाका अलावा सुजन पौडेलसँग अन्दाजी ७० देखि ८० लाख मूल्य पर्ने बा१८च १०२६ नम्बरको सेतो रङको जिप छ । उनले १५ लाख मूल्यको मोटरसाइकल हालै खरिद गरेका छन् । पौडेलले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकामा अवैध बालुवा वासिङ सञ्चालन गरेका छन् । बज्रयोगिनी बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा अख्तियारका सचिव न्यौपानेले भान्जा सुजन पौडेलमार्फत लगानी गरेका छन् । सचिव न्यौपानेकी श्रीमती रोसा अर्यालका नाममा उक्त प्रशोधन केन्द्रमा लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उक्त बालुवा प्रशोधन केन्द्रका लगानीकर्ताहरूमा पूर्वसांसद स्व. चक्रबहादुर ठकुरीका छोरा विमल ठकुरी, सुरज खड्का र देवराज खड्का पनि साझेदार छन् । जसमा २ करोड रुपैयाँ सचिव न्यौपानेकै लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार १०–१५ वटा टिपर र स्काभेटरसमेत उनले यसबीचमा खरिद गरेका छन् । पछिल्लो समयमा उनी अख्तियारका सचिवको भान्जाको तुजुक देखाउँदै १५ करोडको चेक बोकेर असुली गर्न प्रहरी कार्यालयमा धाउने गरेका छन् ।
यस विषयमा सचिव न्यौपानेसँग कुरा गर्दा उनले पौडेल आफ्नो नाता भएको तर आफ्नो कतै लगानी नभएको बताए । उनले भने, ‘जहाँसम्म उजुरीको विषय छ, त्यो जसले दिन पनि पाउँछ, मेरो भान्जा भएकैले उनले दिन नपाउने भन्ने छैन । यदि मेरो नाम र सम्बन्धको दुरुपयोग गरेर कसैले कुनै बदमासी गरेको छ भने, प्रमाण ल्याउनुस् मै कारबाही गर्छु ।’